Trinidad & Tobago dia mandefa ny fampielezan-kevitra Stay to Get Away
Home » Toerana fitsangatsanganana » Trinidad & Tobago dia mandefa ny fampielezan-kevitra Stay to Get Away
Ny Minisiteran'ny Fizahantany dia nanangana ny fampielezan-kevitra “Mijanona hiala:: manomboka eo an-tokantrano” ny ADVENTURE tao amin'ny House of Angostura any Laventille tamin'ity taona ity. Ny fampielezan-kevitra dia hanomboka amin'ny 01 Jolay-31 Aogositra. Ny olom-pirenena dia manana fonosana fitsangatsanganana dimy (35) maherin'ny telopolo (XNUMX) atolotra any Trinidad sy Tobago izay hanome fahafaham-po ny filan'ny mpivahiny efa za-draharaha aza.
Ny fampielezan-kevitra momba ny fizahantany eto an-toerana dia lehibe sy tsara kokoa amin'ity taona ity. Amin'ny ankapobeny, izy io dia ahitana karazana traikefa fizahan-tany isan-karazany amin'ireo toerana sy toerana manintona manerana an'i Trinidad sy Tobago ary fonosana hotely misy lanjan'ny staycation izay ampiasain'ny mpamatsy trano roa (2) - Trano fandraisam-bahiny sy fizahantany fizahan-tany any Trinidad (THRTA) ary ny fizahan-tany momba ny fizahantany kely. Tompon'ny Trinidad sy Tobago (STAOTT).
Raha niresaka tamin'ny mpihaino marobe tamin'ny fanombohana izy, ny Honorable Shamfa Cudjoe, Minisitry ny fizahan-tany, dia nanaiky ny maha-tafiditra ny fampielezan-kevitra Stay to Get Away "satria tohanan'ireo mpiray tsikombakomba amin'ny fizahantany eto amintsika izany. Tena nanandratra fotoana izy ireo hanolotra fonosana mora vidy handoavana teti-bola amin'ireo mpizahatany ao an-toerana izay miantoka ny sandan'ny vola ”.
Ny sekretera maharitra an'ny minisiteran'ny fizahantany, Ramatoa Vidiah Ramkhelawan, dia nanazava fa ny minisitera dia niasa mba hampiroborobo ny fizahan-tany amin'ny fomba maharitra ary miara-miasa amin'ny Corporations isam-paritra hamantatra ny toerana hanaovana fampandrosoana izay hitondra tombony lehibe ho an'ny olom-pirenena sy ny mpizahatany mitovy.
Ramatoa Lorraine Pouchet, filohan'ny fikambananan'ny mpikarakara ny fitsidihana mpizahatany ao Trinidad sy Tobago, dia naneho ny hafaliany fa "ny hetsika MIjanona HETSIKA dia nanjary nahomby vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ireo mpilalao fizahan-tany marobe. Ny tanjona dia ny hampiroborobo ny fankasitrahan'ny mponina ny vokatra fizahan-tany eto an-toerana miaraka amin'izay hanatsarana ny avonavon'izy ireo amin'ity firenena mahafinaritra onenanay ity ”.
NCL Norvezy Masoandro mankany amin'ny seranam-piaramanidina ao Port Canaveral ho an'ny fanaparitahana an'i Kiobà sy Karaiba
Ny millennial dia mandeha 5 heny lavitra noho ny raibe sy renibeny